खल्तीले ल्यायो मोबाइल टपअपमा नेपालकै सबै भन्दा बढी १०% क्यासब्याक पाइने अफर « Artha Path
खल्तीले ल्यायो मोबाइल टपअपमा नेपालकै सबै भन्दा बढी १०% क्यासब्याक पाइने अफर
काठमाडौं । Khalti मा दर्ता गरिएको आफ्नो मोबाइल नम्बर टपअपमा १० % क्यासब्याक पाइने अफर खल्ती डिजिटल वालेट ले ल्याएको छ। Khalti, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी हो। यो अफर टपअप सेवामा हालसम्म नेपाल कै सबै भन्दा बढी प्रदान गरिएको क्यासब्याक रहेको छ।
एनसेल, नेपाल टेलिकम, र स्मार्टको टपअपमा लागु हुने यो अफर अन्तर्गत क्यासब्याक पाउन केवाईसि भेरिफाइड रहेको खल्ती आई.डी. कै नम्बरबाट सोही नम्बरमा रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो योजना सिमित समयावधि को मात्र लागि रहेको छ । हरेक नेपाली महिना अनुसार एक महिनाको अधिकतम क्यासब्याक रु. १०० हुनेछ। त्यसपश्चात् १ % Cashback उपलब्ध हुनेछ। आफ्नो बाहेक अरुको नम्बर रिचार्ज मा पनि सामान्य रूपमा पाइने १ % Cashback उपलब्ध हुनेछ। रिचार्ज गर्दा सम्पूर्ण क्यासब्याक नदेखिए पनि शर्तहरु पुरा भएको खण्डमा भए ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री मा पुरै ऋबकजदबअप पाएको देख्न सकिनेछ।
उक्त अफर सम्बन्धि, पाटन स्थित मकै पोल्दै गरेका खल्तीका एक ग्राहक, ललिता यादवले हामी सँग भन्नुभयो, “खल्ती बाट रिचार्ज गर्न सार्है सजिलो हुनेरहेछ। त्यसमाथि १० प्रतिशत क्यासब्याक पाउँदा मेरो पैसा र समय दुवैको बचत भएको छ”
१० %क्यासब्याक प्राप्त गर्न:
खल्ती एप को टपअप अप्सन मा गई खल्ती आइडिमा रजिस्टर गरिएको मोबाइल नम्बर र रिचार्ज गर्न चाहेको रकम दाखिला गर्ने
१० % अफर सम्बन्धि थप शर्तहरु खल्तीको ब्लग मा गई हेर्न सकिन्छ।
१७ लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु भएको खल्तीले बिगत चार वर्ष भन्दा बढी समयदेखि नेपाली समाजलाई डिजिटाइज गर्न निरन्तर रुपमा योगदान पुर्याउदै आइरहेको छ। ‘खल्ती’ वालेटको प्रयोग गरी ६० भन्दा बढि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पैसा पठाउन सकिन्छ। साथै मोबाइल रिचार्ज, बिजुली, पानी, इन्टरनेट तथा टिभीको बिल भुक्तानी, फिल्म, फोहोर व्यवस्थापन शुल्क, सरकारी कर तथा सेवा शुल्क तिर्ने जस्ता धेरै सेवाहरु लिन सकिन्छ ।